संग्रह - iSearch
बुधवार, अप्रिल १, २०२०
स्नान र सेनेटरी
isearch - अक्टोबर 10, 2017
isearch - अगस्ट 9, 2017
कार्यशाला isearch - अगस्ट 6, 2017 0
श्वासप्रश्वासको मुखौटा यदि तपाईं एसिड, ग्यास वा राम्रो धुलो साँस लिनुहुन्छ भने, यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि धेरै खतरनाक हुनेछ। छालाको समस्या यो हो कि माथि उल्लेखित प्रदूषकहरू सास फेर्ने हावामा प्राय अदृश्य हुन्छन् ....
उपकरण isearch - जुन 21, 2017 0
घर सुधारको लागि मल्टि फंक्शन उपकरण। DIY क्षेत्र मा कार्यहरू जस्तै: हेर्ने, पिसाउने र पॉलिश गर्न सधै केही सीप र बिभिन्न उपकरणहरू आवश्यक पर्दछ। त्यसो भए तपाईले सानालाई ...
उपकरण isearch - जुन 11, 2017 0
SDS ड्रिलहरू लचिलो रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ एक क्लासिक SDS ड्रिल ड्रलको लागि द्रुत-परिवर्तन प्रणाली हो। यो प्रणाली 1975 कम्पनी बोश द्वारा विकसित गरिएको थियो। बाट ...
उपकरण isearch - जुन 4, 2017 1
हथौडा ड्रिल के हो? हथौडा ड्रिल कडा प्रकारको ढु stone्गा र ठोस क concrete्क्रीटमा प्वाल पार्ने उपकरण हो। ऊ जहाँ प्रयोग गरिएको छ ...
उपकरण isearch - जुन 3, 2017 0
ड्रिल कलर - यो आफैले गर्ने काम गर्नेहरूका लागि आदर्श उपकरण डू-ईट-स्वयम्कर्षकहरूका लागि आदर्श उपकरण ड्रिल कलर हो। धेरै अवस्थामा जहाँ तपाईं गोलाकार प्वाल गर्नुहुन्छ।
उपकरण isearch - मई 28, 2017 0
कर्डलेस स्क्रू ड्राईभर के हो, कर्डलेस ड्रिल के हो? अक्सर कर्डलेस स्क्रू ड्राईभ शब्द धेरै प्रकारका लागि सामान्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर व्यक्तिगत उपकरणहरू फरक छन् ...